[Review] Top 5 Kem chấm mụn nào tốt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 Kem chấm mụn nào tốt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 Kem chấm mụn nào tốt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Kunemikhiqizo emakethe njengamanje i-acne spot cream Akukho okudumile kunemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba nesikhumba. Ngokukwazi ukusheshisa ukuhwalala kwe-acne, ukukhuthaza induna futhi kudambise amabala abomvu, avuvukele. I-acne spot cream ibhekwa njengomphumela omuhle ekwelapheni izinduna esikhumbeni. Ngakho-ke kulesi sihloko, ake sifunde kabanzi mayelana nalo mugqa womkhiqizo we-HOT!
1 Iyini i-acne spot cream?
2 Zizwa ngokukhetha ukhilimu wezinduna ofanele
2.1 Inomphumela we-bactericidal
2.2 Umphumela omuhle wobumnyama
3 Okhilimu bamabala bezinduna abaphezulu aba-5 abahamba phambili nabasebenza kakhulu
3.1 1. Kunconywe Abanye Nge-Mi Super Miracle Spot All Kill Cream
3.2 2. I-La Roche-Posay Effaclar Duo+ i-acne spot cream ethuthukisiwe
3.3 3. I-Ducray Keracnyl Pp Anti-Blemish Soothing Cream iphumelela kakhulu
3.4 4. Inketho KaPaula Ephezulu 2.5% I-Benzoyl Peroxide Spotting Cream
3.5 5. Ukhilimu Othenjwayo we-Cellmula Ac Clear Spot Acne Spot Cream
Iyini i-acne spot cream?
Ukhilimu wendawo yezinduna iwumkhiqizo wokwelapha izinduna, okhethekile ekwelapheni amabala anenkani induna ukuletha imiphumela ebonakalayo ngemva kokusetshenziswa okumbalwa kuphela. Ngaphezu kwalokho, ekubunjweni kwama-acne spot creams ngokuvamile anezithako ezithile zemvelo ezisebenzayo. Isiza ukwenza isikhumba sibe bushelelezi kanye nokuvikela izinto ezidala izinduna.
Ngezakhiwo eziphezulu ze-antibacterial kanye nokunciphisa ukuvuvukala, uma usebenzisa ukhilimu wendawo yezinduna, kuzosebenza ukunciphisa ukuvuvukala kwamabala wezinduna. Ngesikhathi esifanayo nciphisa ukwakheka nokukhula kwamanye ama-agent abangela ukuvuvukala kwesikhumba.
Zizwa ngokukhetha ukhilimu wezinduna ofanele
Imigqa i-acne spot cream Njengamanje, kunemikhiqizo eminingi eyahlukene ngenxa yesidingo esikhulayo sokusetshenziswa, kodwa akuyona yonke imikhiqizo emihle futhi ekulungele wena. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukuthenga, sebenzisa okuhlangenwe nakho okulandelayo ukuze uthenge ukhilimu omuhle we-acne.
Inani le-sebum esikhumbeni lizovala izimbotshana, lapho amabhaktheriya aphindaphindeka futhi abangele izinduna ezimbi esikhumbeni. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukhilimu ukuze ubone i-acne, kufanele ubeke phambili imikhiqizo enemiphumela ye-bactericidal, ixoshe ngokuphumelelayo amagciwane abangela induna.
Umphumela omuhle wobumnyama
Ngemva kokuba induna isihambile, ngokuvamile isikhumba sizoshiya amabala amnyama amabi kakhulu okunzima ukuwaphatha. Ngakho-ke ukuze ungalahlekelwa isikhathi esiningi nomzamo, kufanele ubheke ukuthenga lezi zinhlobo i-acne spot cream Iyasebenza futhi ekwelapheni izinduna futhi inamandla okususa amabala amnyama ngemuva kwezinduna.
Uma uthenga ukhilimu wezinduna, funda ngokucophelela izithako ukuze ubone ukuthi zisifanele yini isikhumba sakho. Khetha imikhiqizo equkethe i-Isopropyl methylphenol, sulphur, Triclosan noma Resorcin. Kodwa-ke, uma isikhumba sakho sibucayi, kufanele unikeze okuncamelayo emikhiqizweni enezindikimba zemvelo ezinobungozi.
Uma uthenga ukhilimu we-acne, kufanele ukhethe imikhiqizo enemvelaphi ecacile. Okubaluleke kakhulu kunikezwa imikhiqizo yezimonyo edumile efana ne-La Roche Posay, Some By Mi …. inamagama akudala ekhona emakethe futhi ayithengi nhlobo imikhiqizo entantayo emakethe.
Imikhiqizo Ethengiswayo 50% CLEAN Izinduna #99%, NAHAVA CLEANING SERUM, UKUHLANZA ISIKHUMBA, UKUVIMBELA OKUSEBENZAYO, NOMA YIZIPHI IZINDULU., I-NAHAVA CLEANING SERUM Hlanza IZInduna ESIKHUMBENI, ISKIN OCEAN FUTHI NAMANDLA I-ACNE SERUM, KHOHLWA YIZINDUTHU., SKIN OCEAN Ori’be Anti Acne Cream – Ori’be Anti Acne Cream 20g, Oribe I-Derma Forte Gel 15g – I-Advanced, Ukukhulula Izinduna, Izibazi, Ukunakekelwa Kwesikhumba, i-Gamma (15ml) La Roche-Posay Effaclar Duo+, La Roche-Posay, La Roche-Posay Ukhilimu wokunciphisa ama-pustules, ama-cysts, induna ebomvu kanye nezinduna eziluhlaza okwesibhakabhaka Acnevir Santafa – Type 10gr, Acnevir Santafa I-Zoley White Acne Cream 10g, i-Zoley
Okhilimu bamabala bezinduna abaphezulu aba-5 abahamba phambili nabasebenza kakhulu
Ukhilimu wendawo yezinduna Lona umugqa womkhiqizo okhethekile wokwelashwa kwama-acne, uma usetshenziswa, uzonciphisa ngokushesha izimo ze-acne kanye nezimpawu ze-acne ezibangelwa. Nawa ama-creams ama-acne amahle aphezulu ayi-5, athenjwe kakhulu ngabesifazane.
1. Kunconywe Abanye Nge-Mi Super Miracle Spot All Kill Cream
Kulabo abanezinduna, ama-pustules avuvukele abomvu noma izimbotshana ezinkulu, Abanye Ngezinsuku Eziyi-14 ukhilimu wamabala wezinduna Lokhu ukukhetha okuphelele. Ngokukhishwa kwezithako zemvelo ezinobungozi njengamaqabunga omhlonyane, amafutha esihlahla setiye kanye ne-centella asiatica, umkhiqizo usiza ukuthobisa amabala abomvu, avuvukele nezinduna ngenkathi ulawula uwoyela endaweni yesikhumba.
Ukhilimu wejeli omncane umunca kalula kanye nalapho usetshenziswa esikhumbeni, ulungele zonke izinhlobo zesikhumba kanye nesikhumba esinamafutha nesikhumba esinezinduna. Ikakhulukazi, le-Some By Mi 14 Days i-acne spot cream iyasebenza futhi ngezinduna ezifihliwe, i-cystic acne, ukuvuvukala, induna namakhanda amnyama.
Emkhiqizweni futhi unezinye izithako ezi-3 ezibalulekile ezihlanganisa: I-AHA – I-Alpha Hydroxy Acids iyizithako ezisebenzayo ezisiza ukususa ungqimba lokuqala lwesikhumba esifile, esibuthuntu, esomile nesiqinile. Isiza ukusula imigqa emihle nemibimbi ngenxa yekhono layo lokushubisa i-epidermis kanye nokugqugquzela ukukhiqizwa kwe-collagen. I-BHA – I-Beta Hydroxy Acids iyancibilika kuwoyela, inika isenzo esijulile ukusiza ukususa ukungcola, amaseli afile kanye nokuvula izimbotshana. I-PHA – I-Polyhydroxy Acids inamandla okuzikhipha kodwa ngobumnene, ingacasuli isikhumba futhi isize ekuvuseleleni amaseli esikhumba.
Intengo yesithenjwa: 275,000 VND
2. I-La Roche-Posay Effaclar Duo+ i-acne spot cream ethuthukisiwe
I-La Roche-Posay Effaclar Duo+ i-acne spot cream umugqa womkhiqizo odumile ekunciphiseni induna, ukuvimbela amabala amnyama. Ifomula ephakeme enenhlanganisela yezithako ezisebenzayo zedermatological ezifana ne-Niacinamide, i-Pirotone Olamine nayo isiza ekwehliseni ukuvuvukala, inciphise izinduna phakathi namahora ayi-12 futhi isiza ukukhulula izimbotshana. Lo mkhiqizo awunawo ama-parabens, ama-sulfate, amakha noma ama-preservatives, insipho, ngakho-ke uphephile esikhumbeni esibucayi kakhulu nesicasula kalula.
Njengoba kushiwo ngaphambili, lo khilimu wamabala we-La Roche Posay uqukethe i-Niacinamide ephuma ku-vitamin B3. Ngokubuyiselwa kwesendlalelo esilwa nokuvuvukala nesivikelayo sesikhumba kanye nokuguga. Kuhlanganiswe ne-Aqua Posae Filiformis ukubuyisela ngempumelelo nokulinganisela i-microflora yesikhumba, ukunciphisa induna ngokushesha futhi kuvimbele ukubuya kwezinduna. I-LHA ne-salicylic acid yizithako ezisiza ukuvala izimbotshana, zinciphise i-sebum, futhi zinciphise ngempumelelo induna esikhumbeni.
Ikakhulukazi, i-Zinc PCA iletha umphumela wokunciphisa ukukhishwa kwe-sebum nokunciphisa ukukhula kwamabhaktheriya kanye nokuthambisa isikhumba. Uma isetshenziswa esikhumbeni, uzozizwa upholile, amabala e-acne azowa ngokushesha futhi angabangeli ubuhlungu.
Intengo yesithenjwa: 400,000 VND
3. I-Ducray Keracnyl Pp Anti-Blemish Soothing Cream iphumelela kakhulu
I-Ducray Keracnyl PP Anti-blemish Soothing Cream Kwaziwa ngokuthi i-acne spot cream, esiza ukunciphisa ukuvuvukala kwezinduna ngemva kweminyaka engu-13 yocwaningo. Ukuthuthukiswa kwesithako esisebenzayo i-Myrtacine ngongoti bezitshalo abahamba phambili uPierre Fabre. Ukusebenzisa lo khilimu wamabala wezinduna kusiza ekwehliseni izinduna, kwehlise ukucasuka kwesikhumba futhi kufiphale amabala amnyama adalwa izinduna. Ngesikhathi esifanayo, iphinde inciphise ukukhishwa kwe-sebum ngokweqile, ibhalansi uwoyela futhi isiza isikhumba ukuqeda ukukhanya okunamafutha.
Umkhiqizo awugcini nje ngokuphatha kahle i-acne, kodwa futhi uyomisa i-acne ngokushesha. Ukuletha umphumela wokukhipha izibazi zezinduna ngemva kwamaviki angu-3 kuphela kuyashesha kakhulu futhi kuphephile.
Uhlu lwesithako lwale Ducray acne spot cream luqukethe i-neem tree extract enesenzo sokulwa nezinduna ngokumelene namagciwane e-P.acnes futhi kunciphisa ukukhishwa kwe-sebum. I-dwarf palm fruit extract ine-anti-inflammatory and anti-acne effects. Kanye neNiacinamide ekhishwe kuVithamini PP, inomphumela omuhle kakhulu opholile esikhumbeni esilimele izinduna. Ikakhulukazi, i-Shea Butter iyaziswa kakhulu ngemiphumela yayo yokuqinisa isikhumba futhi esebenzayo yokuqinisa izithiyo.
4. Inketho KaPaula Ephezulu 2.5% I-Benzoyl Peroxide Spotting Cream
Ukukhetha kukaPaula I-Benzoyl Peroxide 2.5% I-acne Spot Cream iwumkhiqizo wokwelapha izinduna osuka e-US, owethenjwa abesifazane abaningi. Lo khilimu we-Paula’s acne spot cream wesikhumba esinezinduna uqukethe isithako esiyinhloko, i-benzoyl peroxide, ebulala amagciwane futhi yomise izinduna namakhanda amnyama. Okuqukethwe kwe-benzoyl peroxide okungu-2.5% kuthathwa njengokwanele nje ukuphumelela ekunciphiseni nasekuvimbeleni ukugqashuka okuncane. Qinisekisa ukuthi awuntinyeli isikhumba njengemikhiqizo equkethe u-5% noma u-10%.
Ukusebenzisa umkhiqizo, i-acne iwa ngokushesha, inciphisa ukusabela kokuvuvukala kanye nokunciphisa ukwakheka kwamabala abomvu namnyama ngemva kwama-acne marks.
Ngaphandle kwalokho, lo khilimu ka-Paula ongu-2.5% wokukhipha izinduna awunazo izinto ezinamandla esikhumbeni noma amandla okucasula isikhumba: utshwala obomile, i-menthol noma i-camphor, ….gwema ukwenza izinduna zibe zimbi kakhulu. Umkhiqizo unejeli elinegwebu, elithambile ukwenza ungqimba oluncane esikhumbeni futhi lifanele isikhumba esine-acne, ama-blackheads. Uma usebenzisa umkhiqizo esikhumbeni, uzokhulula umoya-mpilo futhi udale indawo ye-anaerobic. Ukusuka lapho, amabhaktheriya e-acne awakwazi ukuphila futhi ahlakazeke ngokushesha, okusiza induna ukuba igoqe kungakapheli amahora angama-24.
Intengo yesithenjwa: 600,000 VND/ 67ml.
5. Ukhilimu Othenjwayo we-Cellmula Ac Clear Spot Acne Spot Cream
I-Celmula Ac Clear Spot iwumkhiqizo okhethekile wokwelapha izinduna otuswe odokotela abavela ezibhedlela ezinkulu zesikhumba zase-Korea. Ifanele intsha ekuthombeni, enezinkinga zesikhumba ngenxa yama-pustules, ukuvuvukala kwezinduna. Ngesikhathi esifanayo ingasetshenziswa kokubili izingane nabesifazane abakhulelwe, omama abahlengikazi noma abantu abanesikhumba esibucayi. Umkhiqizo uletha umphumela wokunciphisa ama-acne osheshayo futhi osobala phakathi kwamahora angu-12, ususa induna ngezinsuku eziyi-10-14 kuphela. Ijeli iyabonakala, uma isetshenziswa, izwakala ipholile, futhi iphunga limnandi kakhulu.
Umkhiqizo I-Cellmula acne spot cream Ikhishwe ezitshalweni ezinezithako ezi-2 eziyinhloko: i-organic sulfur ne-Centella asiatica extract. Isebenza ngempumelelo ekwelapheni izinduna ezifana nezinduna ezivuvukalayo, i-cystic acne kanye nama-whiteheads… I-Licorice, ulethisi kanye netiye eliluhlaza okotshani okukhishwe kuthobisa isikhumba, kulawule i-pH, futhi kubuyisele isikhumba esonakele. Ikakhulukazi i-Methyl-sulfonyl methane – uhlobo lwe-oxidized ye-dimethyl sulfoxide (DMSO) ingathuthukisa ukusebenza kwamasosha omzimba futhi ibuyisele isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 260,000 VND
Ngakho-ke sikuthumelele abaphezulu abahlanu i-acne spot cream Ophezulu, othandwa futhi othenjwa ngabesifazane. Ngenxa yezakhiwo zokunciphisa izinduna, ukuvimbela induna ukuthi ingabuyi kanye ne-antibacterial, ukunciphisa amabala amnyama, ukhilimu wamabala wezinduna uyaziswa kakhulu. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi umugqa womkhiqizo we-acne spot cream ubhekwa “njengesixazululo” sesikhumba sanamuhla se-acne.
Xem Thêm Review kem dưỡng thể Paula’s Choice Resist Weightless Body Treatment With 2% BHA | Muasalebang